ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: February 2010
ရှာစားမယ် ဆိုတဲ့ မောင်များ သတိထားစေနိုင်ဖို့ ပါ...
အရက်၊ဘီယာ၊ မူးယစ်ဆေးဆိုတာ သောက်စားသုံးစွဲမိယင် ပင်ကိုယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ 
စွမ်းရည်သတ္တိကို လျော့ နည်းပျောက်ကွယ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဒီပုံတွေကသက်သေပါပဲ...
မယုံယင်တော့ စမ်းကြည့် ပါလေ...
ဟင့် ...မင်းလေး ကဲကိုကဲတယ်...
ဟေ့ ကောင် စောက်ရူး...မင်းကိုယ်မင်းဘာဖြစ်နေတာသိရဲ့ လား...
နောက်လဲလာလည်နော်... မောင်လေး !!!...
Posted by Unknown | at 11:28 PM | 1 comments
Boozy chimp sent to rehab
ရုရှားနိုင်ငံမှ လူဝံတစ်ကောင်ဟာ ဆေးလိပ်နှင့် ဘီယာ သောက်ခြင်းစွဲလာနေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်တိ
ရိစ္ဆာန်ရုံထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်သူများက အဆိုပါမျောက်ဝံအား အကျင့် ပျက်သူများအားစာရိတ္တပြန်
လည်ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းကျောင်းပေးသည့် စခန်းတစ်ခုသို့ ပို့ လိုက်ရပါသည်...
ယခင်ဆပ်ကပ်ဖျော်ဖြေပွဲများမျာ ပါဝင်ပြသခဲ့ ရတဲ့ လူဝံ Zhora ဟာ စိတ်ရိုင်းဝင်လာလို့ ဆပ်ကပ်အ
ဖွဲ့ ကနေ ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း Rostov မြို့ ကတိရိစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုကို ရွေ့ ပြောင်းပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ ရပြီး
သူဟာ အဆိုပါတရိစ္ဆာရုံမှာ လူဝံသားပေါက်လေးများရဲ့ဖခင်အဖြစ် လူဝံမများနဲ့ အတူနေထိုင်ခဲ့ ပြီး
ဘောလ်ပင် မှင်ချောင်းများနဲ့ အရုပ်များဆွဲတတ်သည်အထိတတ်မြောက်ခဲ့ တဲ့ အပြင် ဖော်ပြပါအတတ်
ကောင်းနှစ်ခု ( ဆေးလိပ်နှင့် ဘီယာ ) ကိုပါ တတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်...
” အခုတော့သူဟာ ဘီယာနဲ့ စီးကရက်ကြောင့် ဘ၀ပျက်ခဲ့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်...သူဟာ တိရိစ္ဆာန်ရုံကို
လာသူများကို ဘီယာမရမချင်းတောင်းနေတတ်တော့ တာပါပဲ...” လို့ Komsomolskaya Pravda
အခုတော့ အဆိုပါ လူဝံကို မော်စကိုမြို့ တော်၏အရှေ့ ဖက် ကီလိုမီတာ ၈၀၀ ( မိုင် ၅၀၀ ) မျှကွာဝေး
သော Kazan မြို့ ရှိစာရိတ္တပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းသို့ ပို့ ထားရကြောင်း သတင်းစာက ထပ်မံ၍ဖော်
အရက်နဲ့ ဘီယာကြိုက်တတ်တာကတော့ ရုရှားမှာ လူတွေတင်မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်တောင်အဆစ်ပါ
A Russian chimpanzee has been sent to rehab by zookeepers to cure the smoking and beer-drinking habits he has picked up.An ex-performer, Zhora became aggressive at his circus and was transferred toazoo in the southern Russian city of Rostov, where he fathered several baby chimps, learned to draw with markers and picked up his two vices.
Posted by Unknown | at 8:55 PM |0comments
Labels: news: uk.reuters.com
Watch this movie and win $10,000 -- if you dare ....
ကြည့် ရဲမလား သရဲကား....ဒေါ်လာတစ်သောင်းပေးမယ်...
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ထိတ်လန့် ဖွယ်သည်းထိတ်ရင်ဖို ရုပ်ရှင်ကြည့် 
ပရိတ်သတ်ကို ၎င်းတို့ နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီလိုက်တဲ့ တမလွန်ဘ၀ဆိုင်ရာ သရဲ၊တစ္ဆေရုပ်ရှင်
ကားကို အစမှအဆုံးပြီးစီးသည်အထိတစ်ဦးတည်းကြည့် ရှုနိုင်သူကို ဆုငွေ ဒေါ်လာ ၁ သောင်းပေးမှာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာ Ram Gopal Varma ရဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ပထမပိုင်း အဖြစ်ရိုက်
ကူးခဲ့ တဲ့Phoonk ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇတ်လမ်း Phoonk2ရုပ်ရှင်ဟာ မိသားစုတစ်စုကို ခြောက်လှန့် 
ဒုက္ခပေးနေတဲ့ သရဲ၊တစ္ဆေတစ်ကောင်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်...
” ရုပ်ရှင်ဆိုတာတစ်ကယ်မဟုတ်တာမို့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ ဆိုသူ မည်သူမဆို ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ
တစ်ယောက်တည်းကြည့် ရှုရဲရမှာဖြစ်ပါတယ်....” လို့ အဆိုပါရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီတဲ့ ကြေငြာပွဲပြု
လုပ်တဲ့ Mumbai မြို့ မှာ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Varma ကသတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါ
အခုလို ဆုကြေးငွေကိုရယူလိုတဲ့ စိန်ခေါ်သူကိုရုပ်ရှင်ကြည့် နေစဉ် သူ့ ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုံးကိုတိုင်းတာတဲ့ 
စက်တပ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ပြသနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံး သူ့ အနေနဲ့ မျက်လုံးမှိတ်မထားပဲ ဖွင့် 
ထားတာကို သေချာစေနိုင်ဖို့ ကင်မရာတစ်ခုကိုလည်း တပ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါ နှလုံးခုန်စက်ကမှတ်တမ်းတင်နေတာကို ရုပ်ရှင်ရုံအပြင်ဖက်က မျက်နှာပြင်မှာ တိုက်ရိုက်ပြသ
နေမှာဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်သူသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ ယင် ဆုကြေးငွေ ရူပီးငွေ ၅ သိန်း ( ဒေါ်လာ ၁ သောင်း
ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါရိုက်တာ Varma ကဆိုပါတယ်...
ယခင် Phoonk ရုပ်ရှင်ပထမပိုင်းစတင်ပြသစဉ်တုံးကလည်း အခုလိုမျိူးစိန်ခေါ်တာကို ဒါရိုက်တာဖြစ်
သူ Varma ကကြေငြာခဲ့ ပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ( အနိုင်မရနိုင်အောင် ) မရိုးမသားစီစဉ်
ထားမှုတွေ ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ ပြီးပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ ပါတယ်...
ထိုစဉ်က ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိတဲ့ သူဟာ ရုပ်ရှင်ပြသပြီး မိနစ် ၃၀ အကြာမှာ ရုပ်ရှင်ရုံထဲကနေ
ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ ဆိုပေမယ့်သတင်းစာတွေရဲ့ သတင်းအရတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်
ပိုင်း ဘန်ဂလို မြို့ က ရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်ဟာ ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုအသင့် ရှိနေစေဖို့ မှာကြားထားပြီး လုံ
ခြုံရေးအစောင့် အရှောက်တွေ ရုပ်ရှင်ရုံပြင်ပမှာစောင့် ဆိုင်းထားစေပြီး ရုပ်ရှင်ကို အစမှအဆုံးတိုင်
အောင် တစ်ဦးတည်း ကြည့် ရှုနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
A Bollywood filmmaker has issuedalucrative challenge to horror movie fans:a$10,000 (£6,400) reward for anyone who can watch his latest supernatural thriller, alone, inacinema until the closing credits. Ram Gopal Varma's "Phoonk 2,"asequel to his 2008 film of the same name, is about an evil spirit that traumatisesafamily. "Anyone who says the movie cannot scare him is going to be put inatheatre by himself," Varma told reporters in Mumbai at an event to promote the movie.Varma said the film fan who steps up to the challenge will be wired up toaheart monitoring machine as well asacamera that ensures they keep their eyes open during the whole movie.Readings from the machines will be shown live onascreen outside the cinema, Varma said, and if the contestant succeeds, they will win 500,000 rupees (approximately 6,900 pounds).Varma issuedasimilar challenge ahead of the release of the original "Phoonk" but the promotional contest was withdrawn after allegations the selection process was rigged.
(Writing by Tony Tharakan, editing by Miral Fahmy)
Virginia church worships in the buff
Church welcomes nude parishioners
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ဗာဂျီနီးယားပြည်နယ်အတွင်းမှ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုသို့ တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်းဝတ်
ပြုဆုတောင်းရန်သွားရောက်သူများအနေဖြင့် အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ကြောင့်
ကျရန်မလိုကြောင်းသိရပါတယ်...အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ သွားသူများဟာ
အ၀တ်မ၀တ်ပဲနဲ့ လည်းသွားရောက်ဝတ်ပြုနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်...
” ထာဝရ အဖဘုရားသခင်အနေနဲ့ သင်ဝတ်ပြုဆုတောင်းနေစဉ်မှာ ဘာတွေဝတ်တယ်၊ ဘယ်လိုဝတ်
ဆင်တယ် ဆိုတာတွေကို ဂရုစိုက်နေမယ်လို့ ကျွန်တော်ဖြင့် မထင်ပါဘူး...” လို့ အသင်းတော်ကိုလာ
ရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Richard Foley ကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ အနေနဲ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုကိုသာ အာရုံစိုက်နေတာမို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားများကို အ၀တ်ဗလာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ သင်းအုပ်ဆရာဆီက နာယူရတာကိုဘယ်လိုမှသဘောမထား၊ ပြဿနာ
မရှိပါဘူး လို့White Tail Chapel ကျောင်းက၀တ်ပြုဆုတောင်းသူများအဖွဲ့ ဝင်အသင်းသားများကပြော
ယေရှုခရစ်တော်ဟာလည်း သူ့ ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကာလ အခိုက်အတန့် အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ
ကိုယ်လုံးတီး၊ အ၀တ်ဗလာနဲ့ ပဲဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်လို့ ဘုရားကျောင်းဘုန်းတော်ကြီးက ဆိုပါတယ်...
” ( ယေရှုခရစ်တော်ကို ) သူ့ ကိုမွေးဖွားခဲ့ တုံးက သူဟာကိုယ်တုံးလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်...ပြီးတော့ လက်
၀ါးကပ်တိုင်မှာ စီရင်ခြင်းခံရစဉ်ကလည်း ဘာအ၀တ်မှမ၀တ်ထားပါဘူး...နောက်ပြီး သူ့ ရဲ့ သင်္ချိူင်းအုတ်
ဂူက ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာခဲ့ စဉ်ကလည်း သူဟာသူ့ ရဲ့ အ၀တ်တွေကိုထားခဲ့ ပြီး ကိုယ်တုံးလုံး
နဲ့ ပဲလာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....အကယ်၍ ထာဝရဘုရားသခင်ကသာ ဒီလိုအတိုင်းသာ ဖန်တီးစီရင်ခဲ့ မယ်
ဆိုလျှင် ဒါဟာ မှားယွင်းမှု၊ လက်မခံနိုင်မှု တစ်ခု ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတော့ မလဲ...” လို့White Tail
Chapel ကျောင်းရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး Allen Parker ကပြောဆိုမိန့် ကြားခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါ ၀တ်ပြုဆုတောင်းရာကျောင်းဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ White Tail
Nudist Resort ( အ၀တ်အစားမ၀တ်သူ၊ သဘာဝအတိုင်းနေထိုင်ချင်သူများအတွက် အထူးဟိုတယ်)
ဒီသတင်းလေးဖတ်မိတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာယခုအထိရှိနေဆဲ အ၀တ်မ၀တ်တဲ့ ဂျိန်းဘုန်းကြီးများနဲ့ 
ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ဆာဒူးများကို သတိရမိပါတယ်...
People who attendachurch in Virginia don't have to worry about finding something to wear on Sundays because clothing is optional. "I really don't think God cares what you wear when you worship," said one congregant Richard Foley.
Members at White Tail Chapel say they have no problem getting the word of god fromapastor in his birthday suit because they focus on worship. The church's pastor also says Jesus was naked during some of his most important moments.
"When he was born he was naked, when he was crucified he was naked and when he arose he left his clothes in the tomb and he was naked. If God made us that way, how can that be wrong," the pastor of White Tail Chapel Allen Parker said.
The Whitetail Chapel is part of the Whitetail Nudist Resort.
Posted by Unknown | at 1:46 AM | 1 comments
စိတ်နဲ့ တောင်မပြစ်မှားမိစေနဲ့ နော်....
” တပ်မတော်ကြီးကို စိတ်နဲ့ တောင်မပြစ်မှားမိစေနဲ့ နော်...”
ဘဘ ဦးအောင်ကြီးပြောခဲ့ တာပါ...
ဒီအောက်က တပ်မတော်တွေတော့ မပါလောက်ပါဘူးနော်...
အင်တာနက်ကတွေ့ တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ...
စိတ်လက်ပေါ့ ပါးစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်...
ငါ့ သားများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ...
သူ့ ကိုသာတွေ့ အောင်ရှာခဲ့ ပါကွယ်...
ရုပ်ဖျက်ပေမယ့် လည်း ...
အဆင့် မြင့် သိုင်း...တပ်တွေဝိုင်း....
အားကျလို့ ဝိုင်းကြည့် တာပါ...
အင်အားတောင့် တင်းတဲ့တပ်မတော်...
မိုင် ၂၀ မှာ တိုင်မကွယ်နဲ့ .....
သူတို့ လည်း တပ်မတော်ကြီးထဲ ပါဝင်ပါတယ်....
ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့ အခါမှာ...
ဒီလိုအဆင့် မြင့် တိုက်ကွက်တွေသုံးလိုက်ယင်...
လှံစွပ်ထိုးဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ ....
Posted by Unknown | at 2:44 AM |4comments
တစ်ထိုင်တည်းနှင့် ငွေ အမြောက်အများလိုချင်ပါသလား...
အောက်ဖေါ်ပြပါ အနမ်းပြိုင်ပွဲသို့သာဝင်ပါလေ....
သင့် အနေဖြင့်၇ မိနစ်မျှ မနားတမ်း ၊ ရင်ခုန်ယစ်မူးစွာ
Thomas Cook ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီက
ပေါင်စတာလင် ၅၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ )
IKEA ပရိဘောဂ ဆိုင်တွင်မိမ်ိစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းလဲယူရရှိနိုင်မည့် 
ပေါင်စတာလင် ၂၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ) တန်ဖြတ်ပိုင်း...
နောက်ထပ်အပို ပေါင်စတာလင် ၁၅၀၀ ( ဒေါ်လာ၂၅၀၀ ) တန် ကူပွန်ဖြတ်ပိုင်း တို့ အပြင်...
ထပ်မံပြီးတော့ ပေါင်စတာလင် ၁၀၀၀၀( ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ )
ငွေသားဆု ပါရရှိချီးမြှင့် ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဘလော့ဂ်မှပျိူမေတို့ အသည်းစွဲ
မဟာ ဘလော့ ဂ် အကယ်ဒမီဆုများရှင်
လိုတရ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေး (မနောမရ) နေသီဟ ရဲရန်ကျော်
ခန့်ပီတာ အောင်မှူးဝေ
တဲ့ ယဉ်တစ်ကိုယ် လှတစ်မျက်နှာပိုင်ရှင်...
Entrants Required for
7 minutes non stop kissing, full French kissing with tongues and you could win:
£5,000.00 voucher from
£2,000.00 IKEA voucher, and
£1,500.00 NEXT voucher
plus £10,000.00 in cash
Posted by Unknown | at 12:30 AM |5comments
Man with 'world's longest hair' dies in Vietnam
ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးဆံပင်ပိုင်ရှင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားကွယ်လွန်...
ကမ္ဘာ့ အရှည်လျားဆုံးဆံပင်ပိုင်ရှင်ဟုဆိုနိုင်သော အမျိူးသားဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏နေအိမ်
တွင်သေဆုံးသွားခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းများက ဖော်ပြခဲ့ ပါသည်...
Tran Van Hay ဟုအမည်ရသော ထိုအဖိုးရဲ့ ဆံပင်ဟာ ၆.၈ မီတာ ( ၂၂ ပေ ) အရှည်ရှိပေမယ့် 
တစ်ခါမှတော့ ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းအတွက် တရားဝင်တိုင်းထွာခဲ့ ခြင်းမရှိပါဘူး...
သူ့ ရဲ့ ဆံပင်ဟာ ထူထဲလုံးကျစ်နေပြီးသူ့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို စပါးကြီးမြွေတစ်ကောင်လို ရစ်ပတ်ထားပါ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Kien Gieng ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော အသက် ၇၉ နှစ်ရှိ အဘိုး Hay
ဟာ တိုင်းရင်းဆေး၊ပရဆေးပင်များစိုက်ပျိူးရောင်းချသူအဖြစ်အသက်မွေးကာ ဘ၀ကိုရိုးရှင်းစွာပင်နေ
ထိုင်ခဲ့ သည်ဟု သတင်းများကဆိုပါသည်...
သူ့ ရဲ့ ရှည်လျားတဲ့ ဆံပင်ကြောင့် တော့ သူ့ အနေနဲ့ အဆင်မပြေမှုအနည်းငယ်တော့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပါ
တယ်...အထူးသဖြင့်ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ဆောင်းလို့ မရလို့ သူ့ အနေနဲ့ ဆိုင်ကယ်တော့ စီးလို့ မရခဲ့ 
သူငယ်ရွယ်စဉ်က ဆံပင်ညှပ်ပြီးတိုင်းနေမကောင်းဖြစ်လေ့ ရှိလို့ ဆံပင်မညှပ်ပဲထားခဲ့ တာ နှစ်ပေါင်း
ငါးဆယ်ကျော်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ သူ့ ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ Nguyen Thi Hoa ကပြောပြခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါ
နေ့ ဖက်တွေဆိုယင်တော့ကီလိုဂရမ်တော်တော်များများလေးတဲ့ သူ့ ဆံပင်အခွေကြီးကိုခေါင်းပေါ်
မှာ ထိန်းပြီးတော့ ပုဝါတစ်ခုနဲ့ ဖြစ်သလိုဖုံးအုပ်ချည်နှောင်ထားရပါတယ်တဲ့ ...
79-year-old Hay, who lived in the Kien Giang province of southern Vietnam, worked asaherbalist and livedasimple life, according to reports.
However, his hair did cause him some difficulties, notably that he couldn't takeamotorcycle taxi anywhere because he couldn't fitahelmet around his hair. He had been growing his hair for over fifty years, according to his wife Nguyen Thi Hoa, because he often felt sick afterahaircut.
By day, Hay kept his hair - which weighed several kilograms - balanced precariously on his head, covered byascarf.
Posted by Unknown | at 5:29 AM |3comments
ဧရာမကြက်ဥကြီး.... သာမာန်ကြဥတွေထက်ခြောက်ဆ ပိုကြီးပါတယ်တဲ့ ...
အမှန်တော့ ခြောက်ဆ ပိုလေးတာပါ...မူရင်းသတင်းကမှားတာပါ...
Matilda အမည်ရှိကြက်မလေးဟာ အခုမှ ဥ , စ ဥ တဲ့ ကြက်မဒန်း မလေးမို့ သူမကိုယ်သူမ ဘာတွေ
ဒါပေမယ့်သူမ စတုတ္ထမြောက် ဥ ကို ဥချ လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ပုံမှန်ကြက်ဥထက် ခြောက်ဆမျှ
ပိုမိုအလေးချိန်စီးတဲ့ ဧရာမကြက်ဥကြီးဖြစ်နေပါတော့ တယ်...
ထိုကြက်ဥကြီးဟာ ၃.၅ လက်မ ရှည်လျားပြီး အချင်းက ၈ လက်မတောင်ကျော်ကာ အလေးချိန် ၄.၂
အလွန်အံ့ သြတုန်လှုပ်နေခဲ့ တဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Mark Cornish က ” ဒါဟာ Matilda ရဲ့ စတုတ္တမြောက်
ဥ ခဲ့ တဲ့ ကြက်ဥပါပဲ ...နှစ်ပါတ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဥ ခဲ့ တာပါ...ဒီကြက်မဟာ ဒီလောက်ကြီး
တဲ့ ကြက်ဥဖြစ်အောင် ( အရင်ရက်တွေမှာ မဥခဲ့ ပဲ ) စောင့် ဆိုင်းနေခဲ့ တာဖြစ်ရမယ်...” လို့ ပြောပြ
” စတွေ့ တွေ့ ချင်းကျွန်တော့် မျက်စေ့ တွေတောင် ကျွတ်ထွက်မတတ်ကိုအံ့ အားသင့် သွားခဲ့ ရပါတယ်...
ဒီဥ ကြောင့် သူမဟာ ကမ္ဘာ့ မှတ်တမ်းမှာတောင် ထည့် သွင်းဖော်ပြခံရနိုင်ပါတယ်...
တွေ့ တဲ့ သူတိုင်းကတော့ ငန်းဥ လို့ ကိုထင်ကြမှာပါပဲ...အဲဒီလောက်ကိုကြီးပါတယ်...” လို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်
” ပထမဆုံး ကျွန်တော်စိတ်ပူမိတာက ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ကြက်ဥကြီးဥ ပြီးတော့ ကျွန်တော့ ကြက်မ
Matilda တစ်ကောင် ဘယ်လိုများနေပါလိမ့် မလဲလို့ ပါပဲ...ဒါပေမယ့် ဒီကောင်မကတော့ အေးအေး
ဆေးဆေးပါပဲဗျာ...” လို့ သူကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
Suffolk နယ်...Ipswich ဒေသ မှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၃၆ နှစ်ရှိ Mr Cornish နဲ့ သူနှင့် အတူနေသူ
အသက် ၄၂ နှစ်ရှိ Denise Bartram တို့ ဟာ သူတို့ ရဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေထဲမှာ ကြက်မ လေးကောင်မွေး
ထားခဲ့ တာ လွန်ခဲ့ တဲ့ ခြောက်က ကတည်းကပါပဲ....
” ကျွန်တော်တို့ က ကိုယ့် ကြက်ခြံကထွက်တဲ့ ကြက်ဥ ပုံမှန်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကောင်းလေးနဲ့ ပေါ့ 
ခင်ဗျာ....လူတွေလည်း အခုတော့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူလာကြပါပြီ...စီးပွားရေးကကြပ်တည်းလာနေ
ကြပြီမဟုတ်လား...” လို့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ဆက်ပြောပါတယ်...
Maltida ဆိုတဲ့ အမည် ကိုတော့တမင်ကို ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် ပေးထားခဲ့ တာဖြစ်ပြီးတစ်
ခြားကျန်တဲ့ ကြက်သုံးကောင်ကိုတော့ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ နာမည်တွေဖြစ်တဲ့Phyllis, Polly နဲ့ 
Aida လို့ အမည်ပေးထားခဲ့ ပါတယ်...
ဒတ်ခ်ျမျိူးစစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ နီညိုရောင်၇င့် ရင့် ကြက်တွေဟာ ခြံထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာ
နေကြပြီး သူတို့ ကို ဂျူံနဲ့ အနှံအခွံလွှာတွေ အစာအဖြစ်ကျွေးပါတယ်...
လွန်ခဲ့ တဲ့ တနင်္လာနေ့ က သူ့ ရဲ့ ကြက်မ အနေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အခုလို ကြီးမားလွန်းတဲ့ ကြက်ဥကိုဥခဲ့ 
ရသလဲဆိုတာတော့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Mr Cornish အနေနဲ့ စဉ်းစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး....
သူတို့ အနေနဲ့ ကြက်တွေကိုလည်း တစ်ခြားဘာမှထူးထူးခြားခြားမကျွေးခဲ့ ကြပါဘူး...သူ့ အနေနဲ့ 
ကြက်တွေဟာ ခြံထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ကိုနေကြတာပဲလို့ ထင်ပါတယ် လို့ Mr Cornish ကဆိုပါတယ်...
ကြက်ဥကြီးဟာ ပျော့ ပြောင်နူးညံ့ ပြီး အခွံကလည်းအလွန်ပါးလှပါတယ်...အခုတော့ ဒီဥကိုသိမ်းထား
ပါတယ်...ဒါပေမယ့် နောက်တော့ စားဖြစ်ချင်စားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် လို့ လည်းသူကဆိုပါတယ်....
Matilda ရဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကြိုးစားပြီး ဥ ကြီးဥခဲ့ တာကတော့ စိတ်မကောင်းစရာနဲ့ ပဲ ထိပ်ဆုံးမှတ်
တမ်းထဲ ကိုဝင်နိုင်လိမ့် မယ်လို့ တော့ မထင်ပါဘူးတဲ့ ...
အလေးချိန်အကြီးမားဆုံး ကြက်ဥ အဖြစ် ၁၆ အောင်စရှိတဲ့ ကြက်ဥကြီးက မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ လို့ 
ပါပဲ...အဲဒီကြက်ဥကြီးဟာ အနှစ် ၂ ခုနဲ့အခွံ ၂ ထပ်ရှိပါတယ်...( နှစ်မြွှာပူးကြက်ဥကြီးပေါ့ )
အရွယ်ပမာဏ အကြီးမားဆုံးကြက်ဥကြီးကတော့ အနှစ် ၅ ခုရှိပြီး လုံးပတ် ၈.၆ လက်မ ရှိတဲ့ ကြက်
She's onlyabeginner, so perhaps Matilda the hen didn't know what she was doing.
But the fourth egg she has ever produced turned out to beawhopper - six times heavier thananormal one.
The monster egg is just over 3.5ins long, hasacircumference of more than 8ins, and weighs 4.2oz.
Hen's eggs are typically 2.3ins long, haveacircumference of 5.5ins, and weighameasly 0.7oz.
Shell-shocked owner Mark Cornish said: 'It's only the fourth egg Matilda's ever laid and her first in two weeks. She must have been saving up for it.
'My eyes almost popped out of my head when I first saw it. We might have to see about entering her in the record books.
'It's just ridiculous to look at - anyone would think it wasagoose egg, it's that big.
'My first thought was whether Matilda was okay after laying suchahuge egg but she seems completely non-plussed by it all.'
Mr Cornish, 36, and his partner Denise Bartram, 42, have kept four hens in their garden in Ipswich, Suffolk, for the past six months.
'We quite fancied the idea of having our own eggs onaregular basis,' he said. 'More and more people are doing the same - it'sagood way of cutting costs to beat the credit crunch.'
Matilda was given her name because the couple thought it was 'striking and unusual' but the others - Phyllis, Polly and Aida - have been named after members of their families.
The purebred well-summer dark-tanned Dutch breed chickens roam free during the day and are fed onadiet of peelings and wheat.
Mr Cornish said he had no idea why Matilda suddenly produced the giant egg on Monday.
'We've certainly not been feeding her anything unusual lately. I suppose they leadahappy life so may Matilda was just feeling pleased with herself,' he said.
'The egg itself is really delicate and hasawafer-thin shell. I'm keeping it safe for now but we may have to eat it eventually.'Sadly, Matilda's efforts will not propel her to the top of the egg-laying league.
The heaviest hen's egg ever recorded weighed 16oz. It hadadouble yolk andadouble shell.
And the largest egg, which had five yolks, hadadiameter of 8.6 ins.
Posted by Unknown | at 10:44 PM |0comments
ဘ၀ါဘ၀က စေတနာကောင်းလို့ ကံကောင်းတဲ့ 
သူများကျတော့ ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ ဘူးပေါ့ ...
Love story ofayoung man:
I used to be like this ?
ကိုယ်ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀ ...
I metagirl ....
ကိုယ်မင်းကို တွေ့ ခဲ့ တယ်...
ရင်ခုန်ညွတ်နူးဖွယ် မင်းပုံရိပ်ပဲပေါ့ ....
Together, we were like this ?
ကိုယ့် ရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များထဲက မင်းနဲ့ ကိုယ်...
I gave her gift like this ....
မင်းအတွက် ကိုယ့် နှလုံးသားလက်ဆောင်....
When she accepted my proposal , I was like this...
မင်းပြုံးပြီးတော့ ခေါင်းငြိမ့် လိုက်တဲ့ အခါ....
ကိုယ်အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ ရတယ်ပေါ့ ...
I used to talk to her all night like this ....
ကိုယ်မင်းကို တစ်ညလုံး ....ဒီလို အလွမ်းပုံပြင်တွေပြောခဲ့ တယ်လေ...
and at office , I used to be like this...
နောက်နေ့ ...အလုပ်ထဲမှာဆိုယင်တော့ ....
ကိုယ့် အဖြစ်က ဒီလို ....
When my friends saw my girlfriend , they stared like this?....
သူငယ်ချင်းတွေ ...ချစ်သူ မင်းကိုတွေ့ တဲ့ အခါ ...သူတို့ ဒီလို မနာလိုဖြစ်တယ်လေ....
ကိုယ့် ရဲ့ ကြည်နူးပီတိ ....
But on Valentine Day ....She gave roses to someone else like this....
ဒါပေမယ့်ချစ်သူများနေ့ ရောက်တော့မင်းက တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ကို
နှင်းဆီပန်းလေး ...ဒီလိုပေးခဲ့ လိုက်တော့ .....
ကိုယ် ဒီလို စိတ်ဆိုးခဲ့ ရတယ်လေ...
နောက်တော့ ကိုယ် ဒီလို ခံစားခဲ့ ရပါတယ်...
I felt like doing like this....
ကိုယ်က စိတ်ကြီးသူတစ်ယောက်မို့ ....
But rather did this ....
ကိုယ့် ကိုယ်ကို လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်လို့ ခံယူထားတာမို့ ...
ဒီလိုလေးပဲ တုံ့ ပြန်နိုင်ခဲ့ တယ်နော်...
ကြေကွဲနေခဲ့ တဲ့ကိုယ်....
ဒီလို တွေ ထင်ရာစိုင်းခဲ့ တယ်လေ...
ကိုယ့် မေမေလည်း ကိုယ့် ကို မဆုံးမ နိုင်တော့ ဘူးပေါ့ ....
And I ended up like this...
အဆုံးတော့ကိုယ် ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ ရတယ်ပေါ့ ....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်တဲ့ မင်းအတွက်မို့ 
Posted by Unknown | at 12:36 AM | 8 comments
Shell-shocking: Hen lays an eggastaggering SIX t...
Eighty-year-oldManGets Ready for 31st Child
At 22ins tall, is this Nepali teenager the world's...
Police Inspector holds regular prayer meetings to ...
Woman hired hitman to kill fortune teller because ...
Australian cat thinks it'sachicken
President scraps farewell from five virgins
Women welcome caning for pre-marital sex
Man arrested for stealing 1,200 pairs of shoes in ...
Female suicide bombers wearing Explosive Breast Im...
Different Bikes with Different Designs
Australian retirement village is exclusively for c...
Police end Dagestani laborer's dream of Kremlin ma...
Malaysian lovers fined four buffaloes andapig fo...
Indian state agrees to statue squad
How to explain ....
Italians spend £5 billionayear on fortune teller...
Ambassador calls for divorce after veil-wearing Mu...
Woman in Saudi Arabia sues hotel $1.3 mln over mos...
Indonesia bans buffaloes from political protests
Myanmar discovers over 100-ton jade stone in north...
Bill Gates makes world's biggest ever single chari...
Jail for town mayor found guilty of breaking into ...
New York girl handcuffed and arrested for doodling...
Girl Buried Alive In Honour Killing Horror
မော်ဒန် ဘဘ၊ ဖွားဖွားများ....
A Nice Story About Love by Swami Vivekananda
Caped hero saves woman from spiked drink
ချာချီသောက်တဲ့ ဆေးပြင်းလိပ် လေလံတင်...